135661350
कोरोना राहत: यी सीईओ जसले आफ्नो तलब घटाएर कर्मचारीको तलब बढाए
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले महामारीको रुप लिएसँगै विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक मन्दी शुरू भएको छ। एक सय ९२ देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै धेरै मुलुकले लकडाउन गरेका छन् । नेपालमा पनि आज लकडाउनको तेश्रो दिन । अत्यावश्यकबाहेकका उधोग कलकारखाना तथा कार्यालयहरू बन्द
कास्कीको रुपा गाउँपालिकास्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका एक जनाको मृत्यु भएको छ । १२ दिनअघि भारतबाट आएका ५० वर्षीय विश्ववन्धु नेपालीको बुधबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो । नेपालीलाई मंगलबारदेखि रुपा गाउँपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । नेपालीमा
हङकङका एक नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
हङकङका एक नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । नेपालको पोखरानिवासी २८ वर्षीय युवकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । हङकङमा उनी केस नम्बर ३९४ औं मा परेका छन्। सहकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि परिक्षण गर्दा
काठमाडौं । मंगलबारदेखि सुरु भएको देशभरको लकडाउनको आज तेस्रो दिन हो । काठमाडौं लगायत देशभरका सडक र शहर बजारका पसलहरु सुनसान छन् । सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थिती सडकमा उच्च नै छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आतंकसँगै नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन
१४ घण्टासम्म ‘लुकाइयो’ संक्रमणको जानकारी, चिकित्सक नै असुरक्षित
काठमाडौँ । सञ्चार माध्यमहरूबाट बुधबार दिउँसो खबर फैलियो– मुलुकभित्रै तेस्रो व्यक्तिमा कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि । तर अनलाइनहरूमा मुख्य समाचार बनिसक्दासम्म पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा कार्यरत चिकित्सकलाई मात्र हैन, निर्देशकलाई समेत त्यसबारे पत्तो थिएन । जबकि संक्रमित
सरकारको ९ बुंदे निर्देशन: चैत मसान्तसम्मको साँवा र व्याज तिर्नु नपर्ने
चैत मसान्तसम्मको बैंकिङ कर्जा र व्याज असुली स्थगन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री संयोजक रहेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देशको अवस्था ठप्प
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा इटाली र स्पेनमा बढी
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमण विश्वभर चार लाख ४० हजार १४५ व्यक्तिमा पुष्टि भएको छ । विश्वभर प्रकोपका रूपमा फैलिएको यस भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बुधबार साँझसम्ममा १९ हजार ७४८ पुगेको छ । सङ्क्रमणको प्रभाव सुरूमा चीनमा नराम्रो परेको देखिएको
काठमाडौं । लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तर प्रवाह गरिरहेको काठमाडौँ महानगरले आजबाट महानगर क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानमा (डिसइन्फेक्सन स्प्रे) कीटनाशक औषधि छर्कन थालेको छ । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोभिड–१९ को संक्रमणलाई महानगर क्षेत्र भित्र फैलिन नदिन यस्तो प्रयासको
काभ्रे । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेका बेला त्यसको अवज्ञा गर्दै सञ्चालन गरेका ५६ सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमारविक्रम थापाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लकडाउनका बेलामा
काठमाडौं । मुलुकको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना भाटभटेनी समूहले कोभिड–१९ विरोधी लडाईंमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । भाटभटेनी समूहले सरकारले खडा गरेको कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमार्फत उक्त रकम खर्च गर्ने समूहका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिन नदिन सरकारले सुरु गरेको सातदिने लकडाउनको पहिलो दिन मंगलबार काठमाडौं उपत्यका सुनसान रह्यो । लकडाउन अवज्ञा भएपछि केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले कतिपय जिल्लामा सेना नै परिचालन गरेको छ ।
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण प्रायः सबैजसो सेल्फ क्वारेन्टाईनमा बसिरहेका छन् । जसमा कलाकारहरु पनि रहेका छन् । चलचित्रको छायांकन र प्रदर्शन ठप्प हुँदा सबै कलाकारहरु यतिबेला फुर्सदमा छन् । त्यसैले सबै कलाकारहरु फुर्सदिलो समयको
मुलुक लकडाउन हुँदा किन भएनन् होटल लकडाउन ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मंगलबारदेखि सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपनि होटल व्यवसाय बन्द भएका छैनन् । होटल व्यवसाय अति आवश्यकीय व्यवसाय भएकाले बन्द गर्न नसकिएको होटल एसोसिएन (हान) ले जनाएको छ । कोरोनाका कारण होटल व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित
काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका एक नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका नेपाली अनिल सुब्बा हुन् । उनको वास्तविक नाम रमेश सम्बाहाङ्फे (लिम्बु) हो । उनको आज मृत्यु भएको हो । नेपालमा उनको घर पाँचथरको रानीगाउँ
कोरोनाले घोडेजात्रा स्थगित, साङ्केतिक रुपमा पनि मनाइएन
काठमाडौं । नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिनमा टुँडिखेलमा आयोजना गर्ने घोडेजात्राका सबै कार्यक्रम कोरोना भाइरसको सङक्रमण जोखिमका कारण स्थगन गरेको छ । सोमबारसम्म जात्राको तयारी गरिएकामा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले मङ्गलबारदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले घोषणा गरेको कोरोना कोषलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज ट्वीट गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । उनले लेखेका छन् ,‘कोरोना भाइरसको जोखिम सामना गर्न नेपाल सरकारले निर्माण गरेको
कोरोनाबाट चितवनमा मृत्यु भएको आशंका गरिएका यादव मिर्गौला रोगी
चितवन । चितवनको भरतपूर अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमण भएको आशंकामा आइसोलेसनमा राखिएका एक जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। यद्यपी उनी पहिले देखि नै मिर्गौलाका विरामी रहेका अस्पतालले जनाएको छ । चितवनको भरतपुरस्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा सोमबार भर्ना गरी आइसोलेसनमा राखिएका
लकडाउनसँगै सबै उधोगहरु बन्द, सुनको कारोबार पनि एकसाता पछि मात्रै
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनको लागि सरकारले मुलुक लकडाउन गरेपछि उद्योगहरु बन्द भएका छन् । सडकमा कुनै पनि सवारीका साधन सञ्चालन नहुने र कर्मचारीहरु आवातजावात गर्न नसक्ने भएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले धमाधम उद्योग बन्द गरेका हुन् । सरकारले मङ्गलबारबाट
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणलाई फैलन नदिन नेपाल सरकारले लिएको लकडाउन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । कांग्रेसले यो निर्णयलाई पूर्ण रुपले पालन गर्न सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ । कांग्रेसले आफ्ना सांसदका १५
‘बैकिङ प्रणालीमा ५३४ अर्ब, नोट अभाव छैन’ -राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ , नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा नोटको अभाव नहुने जनाएको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण त्रासमा रहेका ग्राहकले एटिएमको माध्यमबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेपछि बजारमा नोटको अभाव हुने आँकलन गरिएपनि अभाव हुन नदिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
धनुषा । विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न अपराध अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखेका आरोपीलाई मुद्दाको प्रकृति हेरी रिहा गरेर प्रहरी हिरासतको चाप घटाउने रणनीति लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतले गम्भीर
लण्डन । वेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणका लागि ३ साता देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेका छन्। जोनसनले सोमबार साँझ एक टिभी सम्बोधन मार्फत लकडाउनको घोषणा गरेका हुन् । देशवासीका नाममा दिएको सन्देशमा उनले सरकारको पछिल्लो घोषणालाई उल्लंघन नगर्न चेतावानी
सरकारको लकडाउन आदेशको कार्यान्वयन : सुनसान देखियो बुटवल पनि (फोटोफिचर)
वुटवल । नेपालभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी आजदेखि अत्याश्यक अवस्थाबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारले दिएको आदेशको कार्यान्वयन मुलुकभर प्रभावकारी देखिएको छ । बिहानैदेखि मानिसको आवतजावत रोकिएको छ भने सर्वसाधारणको पूर्ण समर्थन देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणले
सुनसान काठमाडौँ : लकडाउन उल्लंघन गरे के हुन्छ ? (फोटोफिचर)
काठमाडौं । विश्वमा फैलँदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखी सरकारले लकडाउन गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बन्दै गएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप नबढोस् भन्नाका
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विश्वभर फैलिँदै गएको कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी यसको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी शुरु गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण सम्बन्धी कुनै घटना फेला परेमा सेनाका चिकित्सकसहितको मुख्य टोली गठन गरी सम्पूर्ण युनिट
सरकारको प्रयासमा पूर्ण साथ दिन उपराष्ट्रपतिको अपिल, आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदान
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’लाई आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने भएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सम्भावित प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोषमा उक्त पारिश्रमिक
काठमाडौं । साउदी अरबमा सोमबार बेलुकादेखि देशभरि कर्फ्युको घोषणा गरिएको छ । स्थानीय समय अनुसार बेलुका ७ बजेदेखि लागू हुने कर्फ्यु आगामी ३ दिनसम्म कायम रहने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । साउदी अरबका राजा सलमान बिन अब्दुल्लाजिज साउदले सोमबार दिउँसो
लकडाउन सुरु, घर बाहिर निस्कन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले आज बिहान ६ बजेदेखि देशैभर लकडाउन गरेको छ । सोमबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको कोभिड –१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले आजदेखि एक हप्ताका लागि देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेपछि बिहान ६